Ciqaabta Suurtogalka Ah Ee Premier League Soo Rogayo, Haddii Dhibco Laga Jarayo Iyo Waqtiga La Ciyaari Doono Kulankii Baaqday Ee Man United vs Liverpool - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaCiqaabta Suurtogalka Ah Ee Premier League Soo Rogayo, Haddii Dhibco Laga Jarayo Iyo Waqtiga La Ciyaari Doono Kulankii Baaqday Ee Man United vs Liverpool
Ciqaabta Suurtogalka Ah Ee Premier League Soo Rogayo, Haddii Dhibco Laga Jarayo Iyo Waqtiga La Ciyaari Doono Kulankii Baaqday Ee Man United vs Liverpool
May 3, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 2
Kulankii Manchester United iyo Liverpool ee Axaddii ee dib loo dhigay kaddib mudaharaadka taageereyaal tiro badan oo jabsaday albaabada garoonka Old Trafford, ayaa waxa hadda laga fikirayaa xilliga suurtogalka ah ee la ciyaari doono.
Jamaahiirtan oo qasab ku galay garoonka Old Trafford, ayaa waxa kale oo ay ciyaartoyda u diideen in ay kasoo baxaan Hotelka Lowry Hotel ee ay ku jireen, iyagoo xidhay waddooyinka garoonka soo gala, taasina waxay keentay in ciyaarta la baajiyo.
Ciyaartoyda iyo tababareyaasha Manchester United ayaa Hotel ka joogay illaa waqti dambe oo xalay ah, ugu dambayntiina waxay u baxeen guryahooda maadaama garoonku xidhan yahay.
Kulankaas ayaa waxa hadda la go’aaminayaa waqti kale oo la ciyaaro iyadoo jadwalkuna cidhiidhi yahay, taas oo walaac ku ah labada kooxoodba.
Muxuu Premier League ka yidhi?
Kaddib markii ay taageereyaashu jabsadeen albaabada Old Trafford oo ay xoog ku jiidheen ciidamada ilaalinayay, waxa qasab noqotay in ciyaarta la baajiyo.
Go’aankan waxa wada qaatay ciidamada booliska ee u maare waayey joojinta mudaharaadeyaasha, labada kooxood, Premier League iyo masuuliyiinta dawladda. Amaanka iyo badqabka qof walba oo Old Trafford ku sugnaa ayaa la sheegay in uu ka mudan yahay in ciyaartu qabsoonto.
Premier League waxa uu sheegay in uu fahamsan yahay, ixtraamna u hayo dareenka taageereyaasha, laakiin ay cambaaraynayaan dhamaan falalka qalalaase, dhaawacyada ay geysteen iyo in ay jabiyeen sharciga xakamaynta xanuunka koofid.
Waxa uu Premier League intaa ku daray in ay go’aamin doonaan waqtiga kulankaas baaqday la ciyaari doono.
Goorma ayaa la ciyaari doonaa?
Premier League waxa uu xalay ku gaabsaday in kaliya dib laga go’aamlin doono waqtiga, laakiin usbuucan suurtogal maaha.
Manchester United ayaa waxay Khamiista la ciyaari doontaa AS Monaco lugta labaad ee semi-finalka Europa League oo ay ugu tegayso Talyaaniga.
Bilowga toddobaadka dambe ayay sidoo kale labada kooxood la kala ciyaari doonaan Leicester City iyo Fulham, halkaasna suurtogal kama aha, waxaana meesha taalla in xilli ciyaareedka lasoo gabogabayn doono May 23.
Waqtiga ugu macquulsan ee la hadal hayo ayaa waxa uu yahay dhamaadka toddobaadka dambe.
Miyaa dhibco laga jarayaa Manchester United?
Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegaysa in Manchester United lagu ciqaabayo ficilka ay taageereyaasheedu sameeyeen, laakiin lama filayo in ciqaabtu noqon doonto in dhibco laga jaro, sababtoo ah waa tallaabo aad xad-dhaaf ku ah.
war koxda ey laciyareyso qamista maàhan as monoco waa as roma
War as monaco iyo iyo man united intey isku arkaayaan mida kale monaco koormeey kaciyaartey talyaaniga wax hubsada dee zxpyl